ग्यास्ट्रिकमा ध्यानुपर्ने ६ कुरा
नेपाल लाइभ शनिबार, पुस ११, २०७७, १९:०१
कागती पानी : पेटमा धेरै ग्यास भएको अवस्थामा कागती पानी पिउने। यसले ग्यास हटाउने काम गर्छ र पेट फुल्न दिँदैन। खाली पेटमा कागती पानी खानाले पेटमा ग्यास कम हुन्छ।
कार्बोहाइड्रेट कम खाने : पेटमा ग्यास जमेर पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले बियर, वाइन, मकै, राजमा, बन्दा, प्याजजस्ता खानेकुराबाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुन्छ।
दूध नपिउने : ग्यास्ट्रिक भएकालाई दूधले फाइदा गर्दैन। पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले दूध नखानु नै बेस हुन्छ। यसको सट्टा दही र अन्य दूधबाट बनेको परिकार खानु राम्रो हुन्छ।
प्रशस्त पानी पिउने : लगातार पानी पिउँदा पेटमा ग्यास जम्मा हुन पाउँदैन र जिउमा समेत पानीको सन्तुलन कायम राख्छ। तर पानीको सट्टा कोक, फेन्टाजस्ता कोल्ड ड्रिङ्कको प्रयोग गर्नुहुँदैन। यसले पेटमा ग्यास बढाउँछ।
लसुन पानी : बिहान उठ्नासाथ दुई–तीन पोटी लसुन पानीसँग निल्ने हो भने ग्यास्ट्रिक भएकाहरूलाई फाइदा गर्छ। उच्च रक्तचाप भएकाहरूलाई समेत यसले फाइदा गर्छ।
खाना समयमा खाने : ग्यास्ट्रिक भएकाहरूले सकेसम्म प्रत्येक दुई घन्टाको फरकमा खाना खाने। लामो समय केही नखाँदा पेटमा हावा भरिएर यसले समस्या उत्पन्न गर्छ।
कमला ह्यारिसलाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन्न योग्य बनाउने ती हात
जर्मनी भ्रमणका लागि बाइडेनलाई मर्केलको आग्रह
डिजिटल उपकरण, सुख्खा आँखा र जोगिने उपाय सुख्खा आँखा : यो यस्तो अवस्था हो, जहाँ आँसु आँखालाई लुब्रिकेट गर्न र पोषण दिन असक्षम भएका कारण, असुविधा र जल्दो उत्तेजनाको महसुस हुन... शनिबार, माघ १०, २०७७
हिटर ताप्दा कसरी हुन्छ जोखिम? यसरी अपनाउनुस् सावधानी चिसो छल्न मानिसहरु आगो ताप्नेदेखि हिटरसम्म बाल्ने गर्छन्। तर आवश्यक सावधानी भने अपनाउँदैनन्। धेरैजसोले झ्यालढोका बन्द गरी आगो ताप्ने... शनिबार, मंसिर २७, २०७७
एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि तेल पुनः तताएर प्रयोग गर्नुहुँदैन, किन ? तेललाई पटक–पटक तताउदा अल्डिहाइड नाम गरेको टक्सिन उत्पन्न हुन्छ। यस्तो तेलको सेवन गरेपछि यसमा भएका टक्सिनहरुले शरीरभित्रको प्रोटिन, इ... बिहीबार, मंसिर १८, २०७७
कमला ह्यारिसलाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन्न योग्य बनाउने ती हात बुधबार, माघ १४, २०७७
जर्मनी भ्रमणका लागि बाइडेनलाई मर्केलको आग्रह बुधबार, माघ १४, २०७७
इटलीका प्रधानमन्त्री कोन्टेद्वारा राजीनामा, राष्ट्रपति मातारेलाद्वारा स्वीकृत बुधबार, माघ १४, २०७७
कानुन नबन्दा इञ्जिनियरको लाइसेन्स परीक्षा व्यवस्था अन्यौलमा मंगलबार, माघ १३, २०७७
निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई मात्रै हेरेर निर्णय दियो : लिलामणि पोखरेल मंगलबार, माघ १३, २०७७